Umthetho Wabavakashi: Izindlela Zokuboshwa Njengesivakashi E-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Izindlela Zokuboshwa Njengomvakashi E-UAE
I-UAE ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eholidini, futhi izivakashi eziningi zithatha uhambo oluhle lokuya ezweni lase-Arabhu ukuyozijabulisa ngokuzele futhi zikhiphe imali ezintweni ezinhle ezikhangayo, ukuyothenga, neminye imisebenzi.
Hlakanipha ukwazi ngemithetho yasekhaya kanye namasiko
uhlale uhambisana nohlelo lwezomthetho
Yize i-UAE iyindawo ethandwa izivakashi, inkululeko ibekelwe umkhawulo. Kukhona izinto ongaboshwa noma uziboshwe. Ngakho-ke kungaba ukuhlakanipha ukwazi ngemithetho yasekhaya kanye namasiko futhi uwahloniphe ukuze uhlale uhambisana nohlelo lwezomthetho. Nazi ezinye zezinto ongavunyelwe ukuzenza uma use-UAE.
Ukudansa emphakathini kubhekwa njengecala e-UAE. Kubhekwa njengokuphazamisa ukuthula komphakathi, ongaboshwa ngakho. Kunobusuku obuningi namaqembu wokudansa abavakashi abangawasebenzisa.
Akukho emthethweni ukungenisa imikhiqizo yengulube kanye nezithombe zocansi kwi-UAE. Futhi, amabhuku, omagazini namavidiyo angahlolwa futhi angahlolwa.
Amacala ahlobene nezidakamizwa aphathwa kabi. Kunezinhlawulo ezinzima zokushushumbisa izidakamizwa, ukushushumbisa, kanye nokuba nempahla (noma ngamanani amancane). Kunesigwebo sentambo ngokushushumbisa izidakamizwa kanye nesigwebo seminyaka engu-4 ejele uma ngabe kutholakala ngisho nenani elincane lezidakamizwa ezingekho emthethweni. Futhi, ukuba khona kwezidakamizwa egazini kubalwa yiziphathimandla ze-Emirati njengefa. Eminye imikhiqizo ye-skincare nokugcwaliswa kwe-E-ugwayi kungathwala izithako ezinjengamafutha e-CBD athathwe njengekho emthethweni ku-UAE. Uma kutholakala, bayabanjwa, kanti umnikaziyo angabhekana namacala obugebengu.
Kunemikhawulo yokuphuza utshwala kuyo yonke i-UAE. AmaSulumane awavunyelwe ukuphuza utshwala, futhi izakhamizi ezingekho emslim zidinga ilayisense yotshwala ukuze zikwazi ukuphuza utshwala ekhaya, noma ezindaweni ezinamalayisense. E-Dubai, izivakashi zingathola ilayisense yotshwala isikhathi esingangenyanga eyodwa kwababili abasabalalisa ngotshwala abasemthethweni baseDubai. Le layisensi ingasetshenziswa kuphela ngaphakathi kwe-Emirate lapho ikhishwa khona. Futhi, ngisho nelayisensi yotshwala yokuphuza ezindaweni ezikhethiwe ezinjengamahhotela, amakilabhu nezindawo zokudlela. Ukuphuza noma ukudakwa esidlangalaleni kuyajeziswa ngaphansi komthetho we-UAE.
Ungaboshwa e-UAE ngokugqoka ngokungafanele emphakathini. Abesifazane bayelulekwa ukuthi bagqoke ngesizotha futhi bamboze izindawo ezibucayi zemizimba yabo ezindaweni zomphakathi njengezitolo ezinkulu nasemapaki. Izingalo nemilenze kufanele zimbozwe ngendwangu, nezingubo zangaphansi kufanele kufihlwe. Ukugqoka okubhukuda kuvunyelwe kuphela emabhishi nasezichibini zokubhukuda. Akukho emthethweni ukugqoka iziphambano.
Ukuthuka, ukwenza okuthukuthelisayo okuthusayo ngemithombo yezokuxhumana nge-UAE nokwenza isenzo esijabulisayo kubhekwa njengokunyanyisayo, kanti izigebengu zibhekana nesikhathi sasejele noma ukuxoshwa. Futhi, ukubonakaliswa komphakathi kothando alubekezelelwa, futhi izivakashi eziningi ziboshelwe ukubamba izandla noma ukwanga esidlangalaleni.
Akukho emthethweni ukwenza ucansi ngaphandle komshado ngaphandle kobudlelwano onabo nomlingani wakho ngaphandle kwe-UAE. Uma kutholakala ukuthi unobudlelwano bezocansi ngaphandle komshado, ungashushiswa, uboshwe, futhi / noma uhlawuliswe futhi uxoshwe. Ukuhlala ndawonye noma ukuhlanganyela ikamelo nomuntu wobulili obuhlukile ongashadanga naye noma osondelene naye akukho emthethweni.
Izinzuzo Zokuqasha Ummeli
Uma kwenzeka uxabana nomthetho e-UAE, kuzofanela uthole usizo lommeli. Ukumelwa kwezomthetho kuzoba wusizo olukhulu, ikakhulukazi ngoba akulula ngaso sonke isikhathi ukuthi izivakashi zilandele yonke imithetho nemigomo ekhona. Ukuqasha abameli kunikeza izinzuzo eziningi, futhi Nazi ezinye:
l Abameli bayayazi imithetho yezwe, futhi bayayiqonda yonke imigudu yezomthetho okungenzeka ukuthi awuyazi. Bayayazi imibhalo efanelekile yokufaka amafayili, kanye nobuchwepheshe bezomthetho abahlangabezane nabo.
l Ummeli onamava ubengaphatha amacala amaningi afana nelakho, ukuze enze ukuqagela okufundile ukuthi icala lakho lingafinyelela kude kangakanani, noma ukuthi icala lakho lingaxazululwa kanjani.
l Ummeli onekhono uzosiza ukufaka amaphepha ezomthetho kanye namanye amaphepha abalulekile ngokufanele.
l Umsebenzi wommeli akukhona nje ukweluleka ngezindaba zezomthetho, futhi bangakunikeza nezeluleko zokukhululeka emoyeni. Bayakuqonda ukucindezeleka isimo esingakudalela kona futhi bangakunika izeluleko ezenza ingqondo yakho ithambe futhi yehlise ingqondo. Ngaphezu kwalokho, amalungelo abameli-amaklayenti aqinisekisa ukuthi noma yini oyitshela ummeli wakho izogcinwa iyimfihlo.
I-UAE indawo enhle yabavakashi, kepha kufanele uqaphele njengoba izinto ezincane zingakubeka ezimpambanweni ngegunya. Uzoba usizo olukhulu uma uyazi imithetho, amasiko namasiko. Kodwa-ke, uma uwela noma yini, qiniseka ukuthi uthola usizo lochwepheshe wezomthetho onolwazi ukuxazulula leyo nkinga.